Brezilianina Mpitendry Mozika Nametraka Orkestra Hanoherana Ny Fanjakana Tetezamita Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Brezilianina Mpitendry Mozika Nametraka Orkestra Hanoherana Ny Fanjakana Tetezamita Ao Brezila
Voadika ny 01 Jolay 2016 3:29 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Magyar, Español, English
Mpitendry Mozika nikarakara ”Kaonseritra ho an'ny demaokrasia” tao amina tranobe ampiasain'ny fanjakana ao Rio de Janeiro. Sary: Nozaraina tao amin'ny Facebook
Herinandro vitsivitsy lasa izay, nanoratra lahatsoratra mampihetsi-po ny Berzilianina iray mpiangaly mozika nanondroany ny hoe ahoana ireo zava-nitranga tato ho ato tao Brezila no tsy ampy feo, lafiny ara mozika toy ny tamin'ny korontana ara-politika nandritra ny andian-taona 1960 sy 1970, fony teo afovoan'ny sehatra ny mozika malaza Breziliana.
Eny, mety tsy hiampy: mibodo sy mikarakara, ao amina mediam-bahoaka, kaoseritra klasika ao amin'ny tranoben'ny Ministeran'ny Kolotsaina ireo Brezilianina mpitendry mozika, izay vao haingana no nakaton'i Michel Temer filohan'ny tetezamita.
Jereo ity iray ity, izay niseho tany Rio de Janeiro tany Palácio Capanema ny 17 May, izay toerana nanovan'ilay Alemàna mpamoron-kira efa nodimandry, Carl Off, ny “Carmina Burana” ho lasa hira iray “Fora Temer” (Mialà Temer):
Ireo mpikarakara dia niteny fa anarivony ny olona tonga nanatrika ilay hetsika. Io no kaonseritra faharoa nokarakarain'ny vondrona — ny voalohany dia tamina toerana ankalamanjana ny 5 May, talohan'ny nanonganana an'i Dilma Rousseff ary izany hoe talohan'ny naharava ny Ministeran'ny Kolontsaina. Noho izany, tena nanana ny hasarobidiny ny zava-nitranga tamin'ity indray mitoraka ity.
Na dia eo aza ny maha tetezamita azy, efa nanambara fiovàna lehibe sahady ao amin'ny fitantanan'i Rousseff ny governemantan'i Michel Temer, miantomboka amin'ny fanoloana manontolo ireo kabinetran'ny ministera ka hatramin'ny fivoaran'ny politika ivelany. Efa nanambara andiana fepetram-pitsitsiana ihany koa izy tahaka ny fampihenana ireo kabinetran'ny ministera, fanovàna ho tsy miankina sy fitadiavana famatsiana ivelany ho an'ireo orinasam-panjakàna, fametrahana fiovàna eo amin'ny lalàn'ny fisotroan-dronono, ary fialàna bebe kokoa amin'ireo torohevitra sasantsasany izay mitady hanao an-tsirambina ny lalàna fiarovana mpiasa bebe kokoa ary hampihena ny rafitra ara-pahasalaman'ny vahoaka. Tamin'ny kabary fanokanana azy, nilaza i Temer fa mivonona ny hifehy ny fiakaran'ny vidim-piainana sy fanatsentsenana ny tsy fahampian'ny tetibola mba hamerenana amin'ny toerany ny toekarena hoy i Temer.
Ny May 12, ny Antenimieran-doholana Breziliana dia nanapa-kevitra manokana hanokatra fitsarana fitsipaham-pitokisana hanoherana ny Filoham-pirenena Dilma Rousseff noh ny filazana azy ho nanao fitaka mba hanafenana ny fatiantoky ny fanjakana. Mila mikisaka mandritry ny volana enina izy mandra-pahavitan'ny fitsaràna farany, ary koa ao amin'ny Antenimieran-doholona sy notarihan'ny filohan'ny Fitsaràna Tampony, no hotapahana ny fanesorana azy na tsia. Anatinà dingana mahavalalanina izay nitelina ny fiarahamonina Brezilianina, toy ireo mpanao politikany, lasa toa nizarazara ireo Brezilianina, eo ireo manao fampielezankevitra ho an'ny fanesorana azy, ary ireo mahita ilay dingana ho toy ny ”fanonganam-panjakana malefaka”
Ny tsy fisian'ny Ministeran'ny Kolontsaina dia nahatezitra mafy ny tontolon'ny zavakanto ao Brezila. Amin'izao fotoana izao, mampiasa tranon'ny fanjakana miisa 18 tamin'ny tanàna 12 ireo mpanakanto isan-karazany. Ireo Breziliana mpihira sy mpanao mozika malaza dia manolotra kaonseritra any anatin'ny sasany amin'izy ireny. Voalahatra ho ny 25 May ao São Paulo ny kaonseritra hafan'ilay orkestra – Ity iray ity, na izany aza, ao amin'ny Mozean'ny Zavakanto ao São Paulo (MASP), toerana lehibe ho an'ireo hetsika fanohanana sy fanoherana ny fanjakana nanomboka tamin'ny 2013.